ज्योति विकास बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २५ साउन २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी ज्योति विकास बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २५ साउन २०७५)
on: २५ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०९:३७ लगानी
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट राष्ट्रिय स्तरको विकास बैङ्कको लाइसेन्स प्राप्त गरी २०६५ साल साउन ९ गतेदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरेको ज्योति विकास बैङ्कले गत आवको चौथो त्रैमासमा रू. ३० करोड ५१ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ३३ प्रतिशतले बढी हो । बैङ्कले अघिल्लो आवमा रू. २२ करोड ८४ लाख नाफा कमाएको थियो । असार मसान्तसम्ममा बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा बढेकाले नाफा बढेको हो । सोही अवधिमा बैङ्कको चुक्तापूँजी १० प्रतिशतले बढेर रू. २ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । बैङ्कले रिजर्भ कोषमा रू. ५१ करोड ५३ लाख छुट्याएको छ । यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा १ सय ५४ प्रतिशतले बढी हो । यसले गर्दा बैङ्कले यस वर्ष शेयरधनीलाई आकर्षक लाभांश दिने सम्भावना देखिन्छ । हाल बैङ्कका ६० ओटा शाखा र १७ ओटा एटीएमबाट ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवासुविधा प्रदान गरिरहेको छ । बैङ्कले थप ३० ओटा शाखा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । साथै एकीकृत सबल विकास बैङ्क बनाउने उद्देश्यले हाम्रो विकास बैङ्कसँग प्राप्ति गर्ने सहमति भएको छ ।
बैङ्कको चौथोे त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आव २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
असार मसान्तसम्ममा बैङ्कले रू.१९ अर्ब ५४ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने रू. १६ अर्ब १० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा निक्षेप ८५ प्रतिशत र कर्जा ७६ प्रतिशतले बढी हो । सोही अवधिमा बैङ्कको लगानी ४४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७७ करोड ६८ लाख पुगेको छ ।
खुद ब्याज आम्दानी रू. ७६ करोड ५६ लाख र सञ्चालन नाफा रू. ४८ करोड २ लाख रहेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा खुद ब्याज आम्दानी ४९ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा ६४ प्रतिशतले वृद्धि हो । कर्मचारी खर्च रू. १८ करोड ४७ लाख र अन्य सञ्चालन खर्च रू. १८ करोड ७६ लाख रहेको छ ।
बैङ्कको स्थिर सम्पत्ति रू. १६ करोड २८ लाख र अन्य सम्पत्ति रू. ३२ करोड ९४ लाख पुगेको छ । बैङ्कले सम्भावित जोखीमबापतको व्यवस्थामा रू. ७ करोड ९ लाख छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । पूँजीकोष पर्याप्तता २० दशमलव ८४ प्रतिशत, पूँजीकोष लागत ९ दशमलव ३१ प्रतिशत र सीडी रेशियो ७१ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ ।
बैङ्कले सार्वजनिक गरेको गत आवकोे चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार तरलता अनुपात ३२ दशमलव ०९ प्रतिशत, प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिक) रू. ११ दशमलव ७७, मूल्य आम्दानी अनुपात ११ दशमलव ९८ गुणा, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. ९ सय ११ दशमलव ९० र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय १९ दशमलव ८७ रहेको छ । बिहीवारको शेयर मूल्य रू. १ सय ३७ रहेको छ ।
खरीद चाप : बैङ्कको बिहीवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप ३ गुणा बढी रहेको छ । सो अवधिसम्म ८ हजार ६ सय २९ कित्ता शेयर खरीद र २ हजार ७ सय ६५ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
मैनबत्ती विश्लेषण : बैङ्ककोे ६६ दिनको करोबार अवधिको अन्तिम दिनमा ओपनिङ सेतो मारोबोजु आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले बैङ्कको शेयर मूल्य आगामी दिनमा बढ्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआई : बैङ्कको ६६ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्यूट्रल जोन (४४ दशमलव ८८ स्केल) मा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : बैङ्कको ६६ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन १ दशमलव ०१ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून छ । यस्तो अवस्थामा जोखीम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम प्राप्त हुने गर्दछ ।
मुभिङ एभरेज : बैङ्कको ६६ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखालाई र १४ दिने औसत मूल्यरेखाले तलबाट काटेर माथि गएको छ । यस्तो अवस्थामा बैङ्कको शेयर मूल्य बढ्ने सङ्केत गर्दछ । यी दुई रेखाभन्दा हालको मूल्य तल छ । बिहीवारको शेयर मूल्य रू. १ सय ३७ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. १ सय ३८ मा प्रतिरोध पाउने र मूल्य सस्तिएमा रू. १ सय ३६ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार १७:५७
७ भाद्र २०७५, बिहीबार ०९:०६
२२ श्रावण २०७५, मंगलवार १८:३२